गठबन्धन भएकाले ८० प्रतिशत मत ल्याएर जित्छौं, धनगढीलाई महानगर बनाउँछौं: नृप वड [अन्तर्वार्ता] | खबर कुञ्ज
गठबन्धन भएकाले ८० प्रतिशत मत ल्याएर जित्छौं, धनगढीलाई महानगर बनाउँछौं: नृप वड [अन्तर्वार्ता]
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनबाट मेयरको टिकट पाएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार नृपबहादुर वड निवर्तमान मेयर समेत हुन् । यसपटक पुनः मेयर बन्ने चाहना गरेका वडलाई कांग्रेसले गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ ।उनको चुनावी योजना, हालसम्म भएका विकासका काम र आगामी चुनावी अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एक कार्यकाल मेयर चलाइसकेको व्यक्ति फेरि किन दोहोरिन खोज्नुभएको ?
– म दोहोरिनेभन्दा पनि मेरो पार्टीले निर्णय नै गरेर मलाई नै फेरि मेयरको जिम्मेवारी दिन खोजेको हो । एक कार्यकाल काम गरिसकेकाले मेरो सम्भावना पनि अरुको भन्दा बढी छ । हामीले स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिँदा काम गर्ने अवसर पनि कम भयो । साढे २ वर्ष कोभिडकै समय भयो । यो बेला काम नै कम भयो भने कतिपय काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि भएन ।
६ महिना हावाहुरीको चपेटामा नै बित्यो । देशैभरमा सबैभन्दा बढी हावाहुरीको चपेटामा पर्ने ठाउँ नै धनगढी उपमहानगर हो । हावाहुरी र कोभिडको समयमा आइपरेका समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेला कामै गर्न पाइएन । बाँकी रहेको २ वर्षमा हामीले ७५३ वटै नगरपालिकामध्ये नमूना काम गर्ने स्थानीय तह धनगढी उपमहानर नै हो ।
काम गरेको भनेर जनस्तरसम्म बुझाउने आधार के छ ?
– हामीले जुन गतिमा खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार सहितको क्षेत्रमा काम गरेको छौं । त्यसले निकै राम्रो नतिजा दिएको छ । जुन वडामा हिजो १ किलोमिटर पनि सडक कालोपत्रे थिएन, अहिले त्यहाँ १८–२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । खानेपानी ८००–८५० घरधुरीले मात्रै खानेपानी प्रयोग गरेका थिए, अहिले १० हजार घरधुरीले खानेपानी पाइसकेका छन् ।
निरन्तर रूपमा खानेपानी विस्तार भएको छ । हिजोको दिनमा खानेपानी ट्यांकी एउटा वडामा मात्रै थियो भने आज १६ वडामा खानेपानी पुगेको छ । कोभिडमा धनगढी उपमहानगरले जे काम गरेको थियो, विभिन्न निकायले मूल्यांकन गरेर दिएको सम्मानले पनि देखाएको छ ।
अरुभन्दा राम्रो गर्नुभएको हो भनेर दाबी गर्ने आधार के छ ?
– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हाम्रो काम विश्लेषण गर्ने संस्थासहितले हामीलाई विभिन्न शीर्षकमा सम्मान गरेका छन् । यस्तो सम्मान हामीले गरेको काम तुलनात्मक रूपमा अरुको भन्दा उत्कृष्ट भएकाले पाइएको हो । हामी राज्यले दिएको नीतिनियमभित्र बसेर काम गर्ने निकाय पनि हौं । यस्तो कामले धनगढी उपमहानगर बनाउनमा थप सहयोग पुगेको छ ।
हामीले हरित क्षेत्रमा काम गरेकै धनगढी उपमहानगर नेपालका सबै स्थानीय तहभन्दा अगाडि आउन सफल भएको छ । अन्य पूर्वाधार पनि तीव्र गतिले निर्माण भइरहेको छ । विद्यालय भवन, स्वास्थ्य कार्यालय बनाउने काम भइरहेको छ । हामीले १८ वडामा स्वास्थ्य कार्यालय, १९ वडामा सामुदायिक भवन बनाएका छौं ।
विद्यालय भवन पनि पर्याप्त मात्रामा बनाइएको छ । जुन क्षेत्रमा आवतजावत गर्न असहज छ, त्यो स्थानमा पुल हाल्ने र बाटो मर्मत गर्ने पनि गरेका छौं । अहिले पनि ३०–३१ वटा प्रोजेक्टहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।
पहिले गरिरहेका काम पूरा गर्न नै दोहोर्‍याएर मेयर हुन्छु भन्न खोज्नुभएको हो ?
– हामीले सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । केही पूरा भएका पनि छन् भने केही पूरा हुने चरणमा छन् । केही काम महानगर बनाउन पनि गर्नुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सहितको तयारी भइरहेको छ । संविधानमा भएको एउटा प्रदेशमा एक महानगरपालिका भन्ने व्यवस्थाअनुसार नै धनगढीलाई स्तरोन्नति गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशको पहिलो महानगर बन्ने प्रयासमा छौं । यीसहित काम गर्न यसपटक फेरि अवसर दिन अनुरोध गरेको छु ।
महानगर हुने गरी काम भइसकेको छ ?
– हामीले सबै क्षेत्रबाट गरेको विकास र महानगरलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका छौं । महानगर हुन सक्ने क्षमतामा हामी पुगिसकेका छौं । हाम्रो महानगरमा आवश्यक सिटीहल तयार पारेका छौं । कोल्ड स्टोर, वडा कार्यालय, आम्दानीको दायरा बढाउने तथा राजस्व वृद्धि गर्ने काम गर्न सफल भइएको छ । कोभिड महामारीमा पनि यो ३० करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छौं । अब यसको दायरा फराकिलो हुँदै महानगर बन्नसक्ने क्षमतामा यो उपमहानगरलाई पुर्‍याउँछु भन्ने छ ।
महानगर र उपमहानगरभन्दा पनि स्थानीयको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम गर्न सक्नुभयो कि भएन भन्नेले अर्थ राख्ला नि ?
– स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धनगढी महानगर हब भइसकेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हबकै रूपमा विकास हुँदैछ । अरु पूर्वाधारमा पनि कहीँकतै कमी हुन दिएका छैनौं, काम गरिरहेका छौं । हामीले उद्यमशीलतालाई बढी जोड दिएका छौं । हरेक घरमा एक जना व्यक्ति उद्यमशील हुने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो नारा नै एक घर एक उद्यमी भन्ने छ । उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्न प्रेरित पनि गरिरहेका छौं ।
यसका साथै हामीले शिक्षामा पनि लगानी गरिरहेका छौं । निजी विद्यालयले ६–७ लाख लिएर दिने शिक्षालाई हामीले १ लाख ८० हजार रुपैयाँमै स्नातक तहको अध्ययन गराइरहेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा इन्जिनीयर, जेटीए उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा दिइरहेका छौं ।
शिक्षामा लगानी बढाउने र उद्यमशीलतामा बढी केन्द्रित हुनु त राम्रो हो तर यही क्षेत्रका स्थानीयले काम भएन भनेर प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन् त ?
– हाम्रो उद्देश्य हरेक व्यक्ति प्राविधिक हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिलको अवस्थामा बेरोजगारी दर बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि हरेक घरबाट उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्नेछ । वर्कशप खोल्ने, मोबाइल मर्मत गर्ने, कृषितर्फ व्यावसायिकीकरण गर्ने सहितको काम हामीले अगाडि बढाएका छौं । ४७ वटा ताललाई माछापालन गर्न अनुदान दिइएको छ ।
दलित समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरूको उद्यमशीलतामा जोड दिएका छन् । यो समुदायका सबै घरमा १–१ वटा बंगुर दिएका छौं, यसबाट १–१ वटा हामीलाई फिर्ता गर्छन् । फिर्ता आएको बंगुर अर्कोलाई दिएर उद्यमशीलता बढाउँदैछौं । यसले मासुको अभाव कम गर्ने भयो भने अर्कोतर्फ उद्यमशीलताको शुरूआत पनि हुन्छ । हामीले आफैं माछा, च्याउ उत्पादन गर्दैछौैं । सम्बन्धित क्षेत्रमा तालिम दिने र अनुसन्धान केन्द्र बनाउने गरी पनि जाँदैछौं ।
स्थानीयले खोज्ने उम्मेदवार विश्वासिलो र एजेन्डा पेश गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने छ । तपाईंको चाहिँ फेरि आफैंले जित्ने आधार के छ ?
– अहिलेको सबैभन्दा प्राथमिकताको एजेन्डा नै उद्यमशीलतामा जोड दिने हो । यसले युवाशक्ति विदेश पलायन हुनबाट जोगाउँछ भने हामीले पनि स्वदेशमै केही गर्ने भावना भएका व्यक्तिप्रतिको विश्वसनीयता बढाउन सक्छौं । युवासँग चाहना हुँदाहुँदै पनि सीप नभएर काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिन्छौं । कृषि, घर बनाउने मिस्त्री उत्पादन गर्ने, अहिले गरिरहेको कृषिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्ने । ७ दिन, १८ दिन, ८ महिनासम्मको तालिम दिएर पनि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा बढी जोड दिने योजना छ ।
प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बलिया भइरहेका अवस्थामा तपाईंले नै जित्ने आधार के छ ?
– यहाँको महानगरपालिका कांग्रेसकै गढको रूपमा चिनिएको छ । पहिले एक्लै लड्दा पनि कांग्रेसले ७० प्रतिशत मत ल्याएर चुनाव जितेको थियो । यसपटक झन् गठबन्धनमा भएकाले मत बढेर ८० प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा छ । गठबन्धन सफल हुने देखिइसकेकाले हामीसँग त अहिले प्रतिस्पर्धी नै कोही छैनन् ।
उसो भए यसपटक पनि फराकिलो मत अन्तर बनाउनुहुन्छ त ?
– यसपटक हामी ८० प्रतिशत मत ल्याउँछौं । हामीले नजित्ने र कम मत आउने त कल्पनै नगरौं । महानगरमा मात्रै नभएर वडामा पनि हाम्रो बहुमत हुने बलिया आधार छन् ।
वडा तहसम्म गठबन्धन नभएको अवस्थामा जित्ने आधार चाहिँ कसरी देख्नुभयो ?
– हाम्रो संरचना बलियो छ, वडा तहमा कांग्रेसको वर्चस्व बढी छ । त्यसैले पनि हामीले नै महानगरको मेयरदेखि वडासम्म सबै स्थानीय तह जित्छौं । गत चुनावमा हामीले १२ वडा जितेका थियौं । ५ वटा माओवादीले र २ वटा मात्रै एमालेले जितेको थियो । एमालेले जितेका ठाउँमा समाजवादीको भागमा परेको छ । माओवादीले जितेको सबै, समाजवादी र हाम्रो आफ्नो गरेर यसपटक झन ठूलो मतान्तर हुने पक्का छ ।
महानगरमा त केन्द्रबाटै टुंगो लागेर गठबन्धन बनेको छ तर वडामा गठबन्धन नहुनु र गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि मतदाता असन्तुष्ट छन् भन्ने छ नि ?
– त्यस्तो छैन । गठबन्धन भएको ठाउँमा माओवादी र नेकपा एसका उम्मेदवार छैनन् । माथि मिलेर गएकाले तल्लो तहमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने नै हो । हामीले जितेको ठाउँमा र पहिलेभन्दा अहिले अझै राम्रो संरचना बनेकाले हामी कमजोर भएको भन्ने त कुनै तर्क नै छैन । साभारः लोकान्तरबाट
मुख्यमन्त्री कप ब्याटमिन्टन प्रतियोगिता सुरु
बैतडीमा ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकियो
बाजुराको साँफे-मार्तडी सडकखण्ड अवरुद्ध
महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरूवात
कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना, चालकको मृत्यु
प्रधानमन्त्री देउवा आज सुदूरपश्चिम आउँदै
फेरि विवादमा मन्त्री आले, अश्लील गाली गरेको अडियो सार्वजनिक
सुदूरपश्चिमकाे कथा बोकेको चलचित्र ‘चिसो मान्छे’ आजबाट प्रदर्शनमा
कैलालीका तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
भूपेन्द्र बडुवालको हत्या गरेको आरोपमा थप एक जना पक्राउ
बडिमालिकामा भक्तजनको चहलपहल
प्रदेश छनोटमा उत्कृष्ट ब्याट्स वुम्यान, सुदूरपश्चिमको टीममा अटाईनन् !
कैलालीमा लम्बाईयो निषेधाज्ञा, वैशाख ३० गतेसम्म निरन्तरता दिइने
म पेलेर होइन, सबैसँग मिलेरै जान्छु: धनगढीका मेयर गोपाल हमाल (अन्तर्वार्ता)
धनगढीमा यसपालि एमालेले जित्दैछ, त्यसका प्रशस्तै कारण छन्– रणबहादुर चन्द [अन्तर्वार्ता]
‘समाजवादी र माओवादीमा दम्भ छ, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदैन’ (अन्तर्वार्ता)
‘धनगढी मोडल’ स्थापित गर्न मेयरमा फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दैछु: गोपाल हमाल (अन्तर्वार्ता)
‘हामी नरहे पनि क्रिकेट अभियान रहिरहोस् भन्ने माहोल सिर्जना गर्ने प्रयासमा छौं’ (अन्तर्वार्ता)
‘आमनिर्वाचनमा गठबन्धन हुँदैन, काँग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउँछ’